Brandt anogadzira magetsi ekutengesa zvigadzirwa zvepasi rese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Brandt anogadzira magetsi ekutengesa zvigadzirwa zvepasi rese
Brandt Tractor Ltd., mubatsiri akazara weBrandt Group of Companies, anofara kuzivisa kuti yakabudirira kuwana Cervus Equipment Corp., zvichitevera kutsigirwa kwe97.66% yechibvumirano muvhoti yaGumiguru 12, 2021 nevanogova veCervus. Kutengeserana uku kunoona kutengeswa pachena Cervus shanduko kuenda ku100% yakavanzika muridzi muchibvumirano chemari yese.
Iko kutengeserana kwakakosha kunogadzira network yeCanada yakakura-yakambotengesa midziyo, ichiwedzera nzvimbo makumi matanhatu neina dzekurima, zvekufambisa, uye nzvimbo dzemidziyo yekushandisa kune Brandt iripo yeJohn Deere Construction & Forestry dealerships mhiri kweCanada. Kana yakanyatsobatanidzwa, ichapa vatengi veCervus mukana kune dzakakura dzenyika zvikamu zveBrandt uye tekinoroji yerutsigiro.
Kutenga uku kunosimbisa chinzvimbo chefemu semutungamiriri wekambani yakazvimiririra yeCanada uye mutengesi mukuru weJohn Deere munyika.
"Kuwedzerwa kweCervus 'bazi network kuhwina kukuru kune vatengi mumisika yese yakakanganisika," anodaro muridzi weBrandt uye CEO, Shaun Semple. "Tine zvakawanda zvekupa uye takagadzirira kupeta maoko edu uye kuwana kuvimbika kwevatengi vedu vatsva kuburikidza nemusanganiswa wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi uye inowirirana, yemhando yepamusoro yekutsigira vatengi."
Chibvumirano chinopa Brandt isingaenzaniswi yekupinda mumusika, kuwedzera nzvimbo yavo yenzvimbo uye kuita kuti kambani iwedzere, mumisika yakasarudzwa, John Deere michina yekurima; Peterbilt midziyo yekufambisa; naClark, Sellick, JLG, Baumann nemimwe michina yekubata zvinhu mukuwedzera kune yavo yatove-inoyevedza runyorwa rwezvigadzirwa nemasevhisi.
Nekutorwa kwenzvimbo dzeCervus muCanada, Australia neNew Zealand, Brandt parizvino ndiye muridzi uye anoshanda 120 yakazara-sevhisi midziyo yekutengesa ine imwezve makumi mashanu+ masevhisi mapoinzi uye inoshandisa vanopfuura mazana mashanu negumi nemazana.
Kudyidzana uku kuchaita zvakakosha muindasitiri iyi sezvo kambani inoburitsa hurongwa hwekuunza akawedzera zvikamu zvigadzirwa, hunyanzvi hwedhipatimendi rebasa, uye maawa akawedzerwa ekushanda kune yaimbove vatengesi veCervus. Sezvo mashandiro ari kubatanidzwa, vashandi munzvimbo idzi vanotarisirwa kuwedzera kusvika ku40% nekuvakwa kutsva kwenzvimbo kune network yese.
"Vashandi veCervus, vatengi, uye nharaunda dzavanogara vese vachabatsirikana kubva mukutora uku kuburikidza netiweki yakasimba, yakasiyana-siyana yevatengesi vanotsigira," anopedzisa Semple. "Brandt yakazvipira zvizere mukuenderera mberi kwekudyara muzvivakwa zvebhizinesi nekusimudzira nharaunda; kune mukana wakakura kune wese munhu muchibvumirano ichi. "
Mutengesi wakavharwa zviri pamutemo muna Gumiguru 22, 2021.
Martinique inovhurazve denga rayo kundege dzeAir Canada